Breziliana avy amin'ny matriarchal tanàna mitady ralehilahy mpampakatra Ny planeta
Breziliana avy amin’ny matriarchal tanàna mitady ralehilahy mpampakatra Ny planeta
Ny zava-misy fa ny tanàna honenana indrindra indrindra amin’ny alalan’ny firaisana ara-nofo tsara tarehy. Ary saika vehivavy antitra roa-polo amby dimy amby telo-polo taona, dia nanambara ny fikarohana ho an’ny soulmate.
Tanora lehilahy amin’ny nahatratra ny taona nalefa tany amin’ny tanàna hafa, ary ireo vehivavy izay manambady ny vadiny mitsidika afa-tsy amin’ny faran’ny herinandro. Ny hany lehilahy izay manantena ny hihaona na efa manambady na ny fianakaviana, hoy taona olom-pirenena Nelma Fernandes.
Rehetra nofy ho raiki-pitia, ary mahazo manambady
Fa tiantsika ny hiaina eto, ary tsy misy olona te-handao, mba hahita ny vadiny, ny tsy mahazatra ponenana niseho tamin’ny taonjato faha. Ny mpanorina, Maria Senorina de Lima, dia voatery nandao ny taniny taorian’ny izy dia voampanga ho fanitsakitsaham-bady.
Tsara homarihina fa izy no namoaka manohitra ny sitrapony
Ny vehivavy dia tsy mamoy fo sy nokarakaraina karazana ben’ny tanàna, izay nanomboka ny ondry hafa mahantra ny vehivavy. Rehefa afaka izany, i Maria ary ireo rehetra taranany ny taranaka fahadimy, dia excommunicated avy amin ny Fiangonana. Ny tanàna ny vehivavy, mitoka-monina amin’ny tontolo ivelany, dia nitarina tsikelikely.
Nisy karazana fomba fiainana, izay raha ny marina dia matriarchy
Ny vehivavy dia mandray ny fifehezana ny tanàna, ary mirotsaka amin’ny fambolena. Ka bachelors izay mandeha hanandrana ny vintana, dia tokony handray izany an-kaonty. Izy ireo dia tsy maintsy zatra ny lalàna, ny pretra amin’ny Fiangonana Evanjelika, Anisio Pereira naka vady avy teo anivon ny mponina ao an-toerana. Izy no nikarakara tao an-tanàna Fiangonana ary niezaka nametraka tsara tarehy fepetra hentitra ny nanonona ny fivavahana. Indrindra indrindra, izy ireo, nandrara ny vehivavy manapaka ny volo, misotro toaka, ary aza mihaino mozika, ary koa ny mampiasa karazana fanabeazana aizana. Taorian’ny Pereira maty, ny vehivavy Noiva manao Cordeiro nanapa-kevitra fa izy ireo dia tsy hamela ny olona mba hibaiko azy ireo ny fomba velona. Te-hihaona amin’ny lehilahy izay dia adino ny fiainana, mba ho tonga ao amin ny fiainantsika. Saingy izy ireo dia tsy maintsy manao izay lazaina ka ho velona araka ny fitsipika, dia nampitandrina Nelma Fernandes. -ny vanin-taona mafana mponina ao an-toerana Rosalia Fernandez hoe: Vehivavy no maro ny zavatra tsara kokoa noho ny lehilahy. Ny tanàna dia tsara fanahy kokoa miohatra amin’ny maro hafa, tsy dia voalamina tsara kokoa noho izay tompon’andraikitra ny olona. Raha misy ny olana, dia hamahana azy ireo tahaka ny vehivavy miezaka hifampiraharaha, fa tsy ny mifanohitra, ny zo Rehetra mba misy fitaovana navoaka tao amin’ny tranonkala ity, dia voaro araka ny Breziliana sy ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon’ny mpamorona sy ny zo mifandraika amin’izany. Ny fampiasana ny misy feo, sary sy lahatsary fitaovana, dia nampakatra ao amin’ny tranonkala, no hany mahazo alalana amin’ny fahazoan-dalana sy ny rohy mankany amin’ny vohikala
← Hihaona any Brezila
Ny Lahatsary Amin'ny Chat Miaraka Amin'ny Ankizivavy Amin'ny Alalan'ny Webcam →